ကောင်းကင်ကို: 07/01/2013 - 08/01/2013
လင်းဖြိုးမောင်နဲ့ ချတ်ရင်းနဲ့ အတွေးရသွားတာပါ။ :D
Posted by Kaung Kin Ko at 5:34 PM No comments: Links to this post
ဘာသာတိုင်းမှာ လူကောင်းတွေရော လူဆိုးတွေရော ရှိတာပေါ့။ ဥပမာ ပြရရင် Boko Haram ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် အဖွဲ့ကို ကြားဖူးတယ်။ Boko Haram ဆိုတဲ့ နာမည်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုက “အနောက်တိုင်းပညာရေးဟာ အကုသိုလ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးတဲ့။ မူစလင်တွေထဲမှာ အဲလို အစွန်းရောက်သူတွေ ရှိသလို … တာလီဘန် အစွန်းရောက်တွေကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မာလာလာ လို မူစလင်တွေလည်း ရှိတာပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မာလာလာ လို လူတွေပဲ ရှိပါစေ။ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး သမားတွေ မရှိပါစေနဲ့။ ဘာသာတိုင်းမှာ လူကောင်းတွေရော၊ လူဆိုးတွေရော ရှိမှာမို့ မြန်မာမှာလည်း မွတ်စလင် အစွန်းရောက်တွေ၊ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ မျက်နှာမဖော်ရဲဘဲ ဆဲနေတဲ့ မွတ်စလင် တချို့တွေ ရှိပေမဲ့၊ အဲလိုကောင်တွေက ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ ပြောပလောက်တဲ့ ကောင်တွေ မဟုတ်လို့ ၊ သြဇာညောင်းတဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် သဘောမျိုး မဟုတ်လို့ တော်သေးတယ်။ အယာတိုလာ ခါမေနီတို့လို မွတ်စလင် ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာမှာ မရှိလို့ တော်သေးတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘုရားစာကို လိုသလို ဆွဲသုံးပြီး hate speech ဖြန့်မယ့် ဘာသာရေး ဝန်ထမ်း မြန်မာမှာ မရှိလို့ တော်သေးတယ်။
အဲလိုလေး အကောင်းဘက်က ရှာကြံတွေးရင်း သက်ပြင်းလေးချပြီး နှပ်မလို့ ရှိသေး အသံနက်ကြီး တသံ ပေါ်လာတာ လန့်တောင် လန့်တယ်။
“ရှိတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘုရားစာကို လိုသလို ဆွဲသုံးပြီး hate speech ဖြန့်မယ့် ဘာသာရေး ဝန်ထမ်း မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိတယ်”
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပြေပြေလည်လည် ဖေးဖေးမမ ပြန်ပြောရတာပေါ့ဗျာ။ “မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အရမ်း နီးစပ်ပါတယ်။ hate speech ပြောဖို့ နေနေသာသာ ဦးဝီရသူကိုတောင် ကာကွယ်ပေးပြီး မိတ်ဆုံစားပွဲတွေ လုပ်နေတဲ့ မွတ်စလင် ခေါင်းဆောင်တွေတောင် ရှိသေးတာ။ ခင်ဗျားက...Facebook ထဲကနေ အာကျယ်နေတဲ့ ကောင်တွေကို တွေ့လာပြီထင်တယ်။ ဒီကောင်တွေက ခံရတာတွေ၊ အဆဲခံရတာတွေ များလွန်းတော့ စိတ်အချဉ်ပေါက်ပြီး ပုဆိုးခြုံထဲကနေ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ် လုပ်နေတာပါ။ အများစုက identity အစစ်ကိုတောင် မဖော်ရဲကြဘူး မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် ချပြရဲဖို့ကတော့ ဝေလာဝေး”
အသံနက်ကြီးက “မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ပုံကိုလည်း ဖော်ရဲတယ်”
“ရုပ်ကို ဖော်ဦးတော့ဗျာ။ အရူးတွေကတော့ ရှိမှာပဲ။ အဲလို ပြောတဲ့သူက ဘာသာရေး ဝန်ထမ်းတွေ မဟုတ် ပြီးတာပဲ”
အသံနက်ကြီးက ပြန်ပြောပြန်တယ်။ “အဲလိုပြောတဲ့သူက ဘာသာရေးဝန်ထမ်း။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘုရားစာကို ဆွဲအသုံးချပြီး ပြောထားတာ”
ကျနော်က သေချာအောင် ထပ်မေးတယ်။ “ထောက်ခံတဲ့ သူတွေကော ရှိလို့လား”
“ရှိတယ်” အသံနက်ကြီးက ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ဖြေတယ်။ တောက်! ရုတ်တရက်မို့ ကျနော် သွေးဆူသွားတယ်။ ဟာ! ငါတို့ နိုင်ငံမှာလည်း အစွန်းရောက် ဘာသာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေပြီပဲ။ ငါတော့ လျှော့တွက်မိတာ မှားပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေ၊ ဘာသာမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေ ကို မြင်ယောင်လာတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံကို လာပြီးတော့ ဒါမျိုးလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ။ မုတ်ဆိတ်မွေး တွေကို တပင်ချင်း ဆွဲနုတ်ပစ်လိုက်မယ်။
ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ အသံနက်ကြီးကို ကျနော် အော်ပြောပစ်လိုက်တယ်။ “ပေးစမ်းပါ။ ပေးစမ်းပါ။ အဲလို လုပ်တဲ့ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး ဝန်ထမ်းရဲ့ link ကို ပေးစမ်းပါ။ အကုန်လုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ မရမ်းလိုပေမဲ့ အဲလိုလုပ်လာတဲ့ တယောက်ကိုတော့ သွေးမနည်းကြောင်း ပြရမယ်”
အသံနက်ကြီးဆီက ဘာမှ မကြားရတော့ဘူး။ ဘယ်ကြားရမလဲ။ ကျနော်က ပုဂ္ဂိုလ် အကောင်အထည် မရှိတဲ့ အသံနက်ကြီး၊ အိပ်မက်ထဲက အသံနက်ကြီး ဆီက link သွားတောင်းနေတာကိုး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုလုပ် link လာပေးမှာလဲ။ ကျနော် Facebook သုံးရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာပဲ။
တိုက်ဆိုင်တာများလား။ နိုးလာတော့ Facebook မှာ link တခု တွေ့လို့ သွားကြည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီ့မှာ အသံနက်ကြီး ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး ဝန်ထမ်း ဆိုတာကို သွားတွေ့တော့တာပဲ။
အာရဗီစာတွေ ရွတ်ပြီးတော့ “အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မှအပ ကျန်ဘာသာဝင်များအား ချေမှုန်းတော်မူပါ” လို့ ဟောနေတဲ့ ဘာသာရေး ဝန်ထမ်းကို တွေ့ပါပြီ။ ‘နီညိုရောင် သင်္ကန်း’ ကြီးနဲ့။
သြော်… ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားပွဲ တချို့မှာ… ပါဠိတွေ ရွတ်ပြီး တရားဟောရာကနေ အာရဗီစာတွေ ရွတ်ပြီး ဟောတဲ့ ဓလေ့ တခေတ်ဆန်းလာတော့မှာ ပါလား။ ခေတ်ပြိုင် တရားပွဲ ပုံစံတွေ လာပြီ။ သကောင့်သား တချို့ရဲ့ အခွက်တွေပေါ်မှာတော့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တွေ သမ်းလို့။
ကောင်းကင်ကို (ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၃)
အဆက်အစပ် link (https://www.facebook.com/photo.php?v=1392555024297137)
Posted by Kaung Kin Ko at 7:21 PM 1 comment: Links to this post
Labels: ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ, သရော်စာများ, အတိုအစ, အတွေး
Posted by Kaung Kin Ko at 1:33 PM No comments: Links to this post
လျှပ်စစ်ကုလားထိုင် နဲ့ ကြိုးမိန့်
ခေတ်မောင်းဂျာနယ် အတွဲ (၂) အမှတ် (၆) ထဲကပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 5:50 PM No comments: Links to this post